Danjire Ameeriko oo maanta ka degay Mqudisho kadib markii dowladdu u yeertay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya, Maxamed Cali Ameeriko oo shalay galab u yeertay xukuumadda Soomaaliya ayaa manta si degdeg ah ku gaaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Danjire Maxamed Cali Ameeriko ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde kusoo dhaweeyay wasiir ku xigeenka wasaarada arrimaha dibadda, Mahad Maxamed Salaad iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan wasaaradda.
Shir jaraa’id oo ay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde si wadajir ah ugu qabteen wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda iyo danjire, Maxamed Cali Ameeriko ayeey ku faah faahiyeen sacdaalka uu danjiruhu dib ugu soo laabtay Muqdisho.
Wasiir Ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay in xukuumadda Federaalka ay u yeeertay danjiraha si loogala tashado xarigii qunsulka safaaradda Siyaad Maxamud Shire ay u geysteen ciidamada Kenya.
Sidoo kale danjire Maxamed Cali Ameeriko oo isna hadlay ayaa tilmaamay in uu Muqdisho u yimid si uu xukuumadda ugu sharaxo ama ugu faah faahiyo xarigii ay ciidamada Kenya u geysteen Qunsulka Safaaradda Siyaad Maxamuud Shire.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa shalay galab shir degdeg ah oo ay ku yeelatay Muqdisho ku sheegtay iney dib ugu yeeratay safiirkuu u fadhiyey Nairobi kadib markii habeen booliska Kenya xireen qunsulka safaaradda, kaasoo si xun loola dhaqmay balse markii dambe lasii daayey.
Sharciga waxbarashada Soomaaliya oo maanta lagu soo bandhigay Muqdisho